ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အသင်းငယ်တွေကို လက်မြှောက်ခဲ့ရတဲ့ အင်္ဂလန်ထိပ်သီးအသင်းများ
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အင်္ဂလန်ကလပ်တွေ မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲများ
9 Nov 2018 . 3:12 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အသင်းငယ် ဇီဗက်ဒါကို မထင်မှတ်ဘဲ (၂-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲလုံးဝ မရှိသေးဘဲ ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေတဲ့အသင်းပါ။ ပထမအကျော့ အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဇီဗက်ဒါကို အဝေးကွင်းမှာ (၂-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးမယ်လို့ ပွဲမတိုင်ခင်က ဘယ်သူမှ မထင်ထားပါဘူး။ အဲဒီပွဲကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အုပ်စုက တက်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်ရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်လာပါပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ အသင်းငယ်တွေကို မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ထင်ရှားတဲ့ပွဲတွေကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
Spartak Moscow 4-1 Arsenal – November 22, 2000
၂၀၀၀-၀၁ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရုရှားကအသင်းငယ်လေး စပါးတပ်မော်စကိုကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကွင်းကလည်း ညံ့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့် အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေ ဘယ်လိုမှ ခြေစွမ်း မပြနိုင်ဘဲ အခုလို ဂိုးပြတ်ရှုံးပွဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Maccabi Haifa 3-0 Manchester United – October 29, 2002
ဒီပွဲမှာတော့ မန်ယူအသင်းဟာ အုပ်စုကတက်နေပြီဖြစ်လို့ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် Alex Ferguson ဟာ အဓိက ကစားသမား အတော်များများကို အနားပေးပြီး မက္ကာဘီဟိုင်ဖာအသင်းကို ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကတော့ အစ္စရေးမြေမှာ ဂိုးပြတ်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲကို မန်ယူ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပဲ။
Chelsea 0-2 Besiktas – October 1, 2003
ရုရှား သန်းကြွယ်သူဌေး အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ Roman Abramovich ရဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာပဲ ဘက်ဆစ်တက်ကို မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်း လူစာရင်းမှာ ကစားသမားသစ် (၅)ဦးအထိ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဘက်ဆစ်တက်အသင်းရဲ့ အောင်ပွဲကိုတော့ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Liverpool 0-1 AK Graz – August 24, 2004
၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ လီဗာပူးလ်အသင်း (၅)ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းက ခြေစစ်ပွဲမှာပဲ အဆုံးသတ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တတိယအဆင့် ခြေစစ်ပွဲမှာ သြစတြီးယားက အသင်းငယ်လေး AK Graz နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့လို့ အုပ်စုအဆင့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ တက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားခဲ့ရသေးတယ်။ အဝေးကွင်းမှာ (၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် အိမ်ကွင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဂိုးထပ်မပေးရလို့သာ ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့တာပါ။
Copenhagen 1-0 Manchester United – November 1, 2006
၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ဆင်နွှဲခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဒိန်းမတ်ကလပ် ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး မန်ယူကို Shock ဖြစ်အောင် လုပ်ပြခဲ့တယ်။ ကိုပင်ဟေဂင်အတွက် အနိုင်ဂိုးကို အက်စတွန်ဗီလာတိုက်စစ်မှူးဟောင်း အောလ်ဘတ် Marcus Allback က သွင်းယူခဲ့ပြီး မန်ယူအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ချေပဂိုး ပြန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် လူကျွံဘောဖြစ်ခဲ့တယ်။
Chelsea 1-2 Basel – September 18, 2013
ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို တစ်ကျော့ပြန်ကိုင်တွယ်တဲ့ မော်ရင်ဟို Jose Mourinho ရဲ့ ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ ဘေဆယ်အသင်းက မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးကို ဒုက္ခပေးခဲ့တာက အဲဒီတုန်းက သူတို့ရဲ့ အပယ်ခံ ကစားသမားဖြစ်တဲ့ မိုဟာမတ်ဆာလာ Mohamed Salah ဖြစ်ပြီး ဘေဆယ်အသင်းအတွက် ချေပဂိုးသွင်းယူခဲ့သလို Marco Streller က အနိုင်ဂိုး သွင်းယူခဲ့လို့ စတမ်းဖို့ဘရစ်ခ်ျမှာ ချယ်လ်ဆီး အရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်။
ခနျြပီယံလိဂျမှာ အင်ျဂလနျကလပျတှေ မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ပှဲမြား
ပွီးခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစုပှဲစဉျမှာ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အသငျးငယျ ဇီဗကျဒါကို မထငျမှတျဘဲ (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲလုံးဝ မရှိသေးဘဲ ခနျြပီယံလိဂျမှာလညျး ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနတေဲ့အသငျးပါ။ ပထမအကြော့ အိမျကှငျးမှာ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ ဇီဗကျဒါကို အဝေးကှငျးမှာ (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးမယျလို့ ပှဲမတိုငျခငျက ဘယျသူမှ မထငျထားပါဘူး။ အဲဒီပှဲကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အုပျစုက တကျဖို့အတှကျ ရုနျးကနျရတော့မယျ့အနအေထားဖွဈလာပါပွီ။ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှေ အသငျးငယျတှကေို မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာ အမြားကွီး ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲဒီထဲကမှ ထငျရှားတဲ့ပှဲတှကေို Akhayar Sports ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
၂၀၀၀-၀၁ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစုအဆငျ့မှာ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ရုရှားကအသငျးငယျလေး စပါးတပျမျောစကိုကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အရှကျတကှဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကှငျးကလညျး ညံ့ ရုရှားနိုငျငံရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ရာသီဥတုအခွအေနတှေကွေောငျ့ အာဆငျနယျကစားသမားတှေ ဘယျလိုမှ ခွစှေမျး မပွနိုငျဘဲ အခုလို ဂိုးပွတျရှုံးပှဲနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲမှာတော့ မနျယူအသငျးဟာ အုပျစုကတကျနပွေီဖွဈလို့ နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျ Alex Ferguson ဟာ အဓိက ကစားသမား အတျောမြားမြားကို အနားပေးပွီး မက်ကာဘီဟိုငျဖာအသငျးကို ရငျဆိုငျခဲ့တယျ။ ရလဒျကတော့ အစ်စရေးမွမှော ဂိုးပွတျရှုံးပှဲတဈပှဲကို မနျယူ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာပါပဲ။
ရုရှား သနျးကွှယျသူဌေး အဘေရာမိုဗဈချြ Roman Abramovich ရဲ့ ငှကွေေးတှနေဲ့ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူပွီး ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျခဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ အိမျကှငျးမှာပဲ ဘကျဆဈတကျကို မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျး လူစာရငျးမှာ ကစားသမားသဈ (၅)ဦးအထိ ပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ ဘကျဆဈတကျအသငျးရဲ့ အောငျပှဲကိုတော့ မတားဆီးနိုငျခဲ့ပါဘူး။
၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ လီဗာပူးလျအသငျး (၅)ကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ သမိုငျးဝငျမှတျတမျးက ခွစေဈပှဲမှာပဲ အဆုံးသတျလုနီးပါးဖွဈခဲ့ရတယျ။ တတိယအဆငျ့ ခွစေဈပှဲမှာ သွစတွီးယားက အသငျးငယျလေး AK Graz နဲ့ ဆုံတှခေဲ့လို့ အုပျစုအဆငျ့ကို လှယျလှယျကူကူ တကျနိုငျမယျလို့ ထငျကွပမေယျ့ ခကျခကျခဲခဲ ကစားခဲ့ရသေးတယျ။ အဝေးကှငျးမှာ (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ အိမျကှငျးမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ဂိုးထပျမပေးရလို့သာ ခွစေဈပှဲအောငျခဲ့တာပါ။
၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲ ဆငျနှဲခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ဒိနျးမတျကလပျ ကိုပငျဟဂေငျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ထိပျသီး မနျယူကို Shock ဖွဈအောငျ လုပျပွခဲ့တယျ။ ကိုပငျဟဂေငျအတှကျ အနိုငျဂိုးကို အကျစတှနျဗီလာတိုကျစဈမှူးဟောငျး အောလျဘတျ Marcus Allback က သှငျးယူခဲ့ပွီး မနျယူအတှကျ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ခပြေဂိုး ပွနျသှငျးခဲ့ပမေယျ့ လူကြှံဘောဖွဈခဲ့တယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျးကို တဈကြော့ပွနျကိုငျတှယျတဲ့ မျောရငျဟို Jose Mourinho ရဲ့ ပထမဆုံး ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာ ဘဆေယျအသငျးက မထငျမှတျတဲ့ ရလဒျကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးကို ဒုက်ခပေးခဲ့တာက အဲဒီတုနျးက သူတို့ရဲ့ အပယျခံ ကစားသမားဖွဈတဲ့ မိုဟာမတျဆာလာ Mohamed Salah ဖွဈပွီး ဘဆေယျအသငျးအတှကျ ခပြေဂိုးသှငျးယူခဲ့သလို Marco Streller က အနိုငျဂိုး သှငျးယူခဲ့လို့ စတမျးဖို့ဘရဈချြမှာ ခယျြလျဆီး အရှကျကှဲခဲ့ရတယျ။